Muuri News Network » TOOS U DHAGEYSO: Weerarada Magaalada Baydhabo oo lagu baaba’ay
TOOS U DHAGEYSO: Weerarada Magaalada Baydhabo oo lagu baaba’ay
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay labo Qarax oo ismiidaamin ahaa oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Guddoomiyaha Gobolka Baay, Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Qaraxyadaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 19 Ruux oo halka 24 kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen.
Guddoomiye Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa waxuu sheegay in Xaalada ay kacsan tahay islamarkaana Gaadiidka gurmadka deg deg ay wadaan daabulida Dadkii ku waxyeeloobay Qaraxyadii ka dhacay Magaalada Beydhabo.
Wararka ayaa sheegaya in Dadkii ku dhintay Qaraxyadaasi uu ku jiro Wasiir ku xigeenka Wasaarada Hub ka dhigista iyo Dhaqan celinta ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ilaa iyo hadda majirto cid sheegatay Mas’uuliyada Qaraxyadan ismiidaaminta ah ee ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.